forum ကိုနည်းနည်းအကြံပြုကြည့်ချင်ပါတယ် - MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်တို ့ဆောဖ်၀ဲလ်တွေတင်တဲ့အခါမှာ rapidshare တို့hotfile တို ့စသဖြင့်တင်ပေးတဲ့
နေရာမှာ ifile.it မှ လိုချင်တာ mediafire မှလိုချင်တာတွေဆိုတာနဲ ့ပက်သက်ပြီးတော့ပေါ့
လူတွေက အလွယ်ကြိုက်နေပါတယ် အဲ့တာတွေက ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့ ifile.it မှ
mediafire မှဒေါင်းချင်တာတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး အကယ်လို ့များ လင့်က မှားနေတယ် မရရင်သာ
တောင်းဆိုသင် ့ပါတယ် တကယ်တန်းဆိုရင် အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါမှ လွယ်ကူမှူတွေ မရှိပါဘူး
တစ်ချို ့ဖိုင်တွေဆို ရှာရတာ တော်တော်ခက်ပါတယ် အဲ့အတွက်ပေါ့ဗျ တင်ပေးတဲ ့သူလဲ
နှစ်ခါအလုပ်မများအောင် ပေးထားတဲ ့လင့်ကပဲဒေါင်းကြပါလို ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
ဘယ်သူ ့ကိုမှ စော်ကားတာမဟုတ်ပါ အကြံပြုတာပါ ကျွန်တော့ကို ဘယ်လိုမှတော့သဘောမထားပါနဲ ့
mz ကိုထိထပ်ပိုကောင်းမွန်စေချင်သောကြောင့်သာ ဒီပိုစ့်ကိုတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် အားလုံးက
rapidshare ကဟာတွေကို ပြန်တင်ခိုင်းကြတာက တင်ခိုင်းတဲ့လူတွေပျင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအစ်ကိုရေ။ rapidshare ဆိုတာက အစ်ကိုသိတဲ့အတိုင်း အကောင့်ဝယ်ထားမှ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွဲလို့ရတာပါ။ ဘန်ကျော်မှာနေတဲ့လူတွေအတွက်က rapidshare က ဆွဲခွင့်ရဖို့အတွက်ကတော့ နတ်ပြည်တရက်လောက်ကြာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်တောင်းတဲ့လူတွေမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဘန်းကျော်ကလူများကို နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါအကို ကျွန်တော်လဲ ဘန်းကျော်က လူပါပဲ rapidshare တို ့hotfile တို ့ကနေဒေါင်းဖို ့ဆိုတာ
ခက်ပါတယ် အဲ့ဒီအတွက်လဲ ကျွန်တော်တို ့အတွက် poxy ကျော်နိုင်မဲ့ဆောဖ်၀ဲလ်များစွာ ရှိပါတယ်
အကို့ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ ဗျာ ကျွန်တော်တို ့ဆိုလဲ တော်တော်ဒုက္ခခံပြီးတော့
ဆွဲရပါတယ် rapidshare downloader နဲ ့ဆွဲတဲ့အခါမှာလဲတစ်ခါတစ်လေ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိပါ
တယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားကြည့်ကြပါလို ့ပြောချင်
ညီလေးရေ တခါတလေကျတော့လည်း ဆွဲမရရင် အဲလိုအကူအညီတောင်းကြရတာပါပဲ။ အလွယ်ကြိုက်လို့ရယ် မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
အစ်ကိုပြောတာမှန်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်... တချို့လူတွေက RS ကဖိုင်တွေကို ကျော်ပြီး မဒေါင်းတက်တဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် အခု မှ ကွန်ပျူတာကိုစပြီးလေ့လာရင်းနဲ့...software လေးတွေလိုချင်တဲ့အခါ RS ကို မလိမ့်တပါတ်လုပ်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းေ၀းပါတယ်။ သိတဲ့သူတွေနားလည်တဲ့သူတွေကတော့ လုပ်တက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်...အဓိကတော့...RS အကောင့်မရှိတဲ့သူတွေ၊ RS ကိုဘယ်လိုကျော်ပြီးဒေါင်းရမလဲ မသိတဲ့သူတွေ ကို အစ်ကိုတချက်လောက်နားလည်ပေးပါ။
Forum မှာ Software တောင်းတဲ Thread တွေက Software တစ်ခု Thread တစ်ခုနှုန်းလောက်နဲ့ တော်တော်များလာတာကို တွေ့ရတယ်...ဒီပုံအတိုင်းသာ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် (Database လေးတာ မလေးတာ ကျနော် မသိဘူးနော်) နောက် တစ်နှစ်လောက်ဆို ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုရှာရမယ်တောင် သိတော့မှာ အဟုတ်ဖူးဗျ....အဲ တစ်ခုလောက်လိုချင်လို့ ရှာတာ တစ်ရက်လောက်ကြာတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်...ကျနော်တို့လည်း အတတ်နိုင်ဆုံးကို ရှာထားသမျှတွေကို (ကွန်ကောင်းရင်)ပြန်တင်ပေးတာ၊ (ကွန်ဂိန်နေရင်) လင့်ပေးတာလောက်တော့ လုပ်နေပါတယ်...ဒီတော့ဗျာ ကျနော်စဉ်းစားကြည့်တာက နောက်လလည်လောက်ဆိုရင် ကျနော့် ရက်ပစ်ကကောင်း6လစာသတ်တမ်းတိုးလိုက်ပြီး ယူဇာနဲ့ ပါတ်၀က်ကို ပေးထားမယ်....အဲတစ်ခုတော့ရှိတယ် အကောင့်ကိုတော့ secure lock လုပ်ထားပါမယ်....ဒါဆိုရင်တော့ တောင်းတဲ့သူတွေရော ပေးတဲ့သူတွေပါ အဆင်ပြေနီုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်....လောလောဆယ် ကျနော် စမ်းသုံးနေတဲ့ ရက်ပစ် အကောင့် နှစ်ခုရှိတယ် စမ်းသပ်ကာလကို ပြည့်စုံအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားလို့ ဒီလိုတင်ပေးမယ် စိတ်ကူးတာပါ...အဲ ဒီလို အကောင့် Share လုပ်တဲ့အတွက် ဖြစ်လာမယ့် ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို ေ၀ဖန်အကြံပြုကြပါလို့.....မသင့်တော်ဘူးဆိုရင်လည်း လက်ရှိ ကျနော်နဲ့အတူစမ်းသပ်သုံးစွဲနေကြတဲ့
-1) ကိုစိုင်းကျော်ဇွာေ၀ (512 လိုင်းတစ်ခုထည်းကို တစ်ဦးတည်း အပိုင်စီးသုံးနေပါတယ်)၊
-2) ကိုရသာ (ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်)၊
-3) ကိုယောင်စိန် (သူကတော့ မအားတာများပါတယ်)၊
-4) ကိုဇာနည်အောင် (သူ၏ ဘလော့အတွက် မိန်းကလေးများစွာနဲ့ အမြဲတမ်း ရန်ဖြစ်နေသူ)၊
-5) ကိုကို၀င်း (သူလည် ကွန်နက်ရှင်ကို ကောင်းကောင်းရထားသူပါ)၊
ကျန်တဲ့သူတွေတော့ ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူးဗျ။ ကျနော်ပေးသုံးထားတာ တော်တော်များများရှိတယ် 10 ယောက်ကျော်တယ်...........
အထက်ဖေါ်ပြပါ မန်ဘာများစီကို PM ပို့တောင်းဆိုကြည့်ပါ.....သူတို့တွေပြန်တင်ပေးပါမယ်လို့ ကျနော့်ကို ဂတိပေးထားပါတယ်ဗျ
(မချက်ကတော့ လန်ထွက်နေတာဘဲနော်) ) )
RS accountနဲ့ဆို ဆွဲရတာအဆင်ကိုမပြေပါ။ တော်တော်များများ RSက တိုက်ရိုက်ဆွဲမရပါ။ ဆွဲလိုက်တိုင်း already downloadedပဲပြောနေတယ်။ RS downloaderနဲ့ဆွဲတာ ၅ဖိုင်ရဖို့ ၂ပတ်တိတိဆွဲရပါတယ်။ အဲဒီ့၅ဖိုင်ပြည့်မှ applicationတခုရမှာမို့ပါ။ ဒါတနေကုန်စက်ဖွင့်ထားပြီး RS downloaderနဲ့ဆွဲခိုင်းနေရတာ။ ဒါတောင်လူက သွားသွားပြီး ဖိုင်ဆိုဒ်စစ်စစ်ပေးနေရသေးတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပြည့်မရပဲ 13MB 6MBနဲ့ပဲ ပြပြနေလို့။ သူများကိုတော့ ဒုက္ခပေးချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ တော်တော်လေးလိုအပ်လို့မှ မဟုတ်ရင် မရရင် မဆွဲဘဲနေပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ မိနစ်တိုင်းဟာ ရွှေဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒုက္ခခံပြီးတင်ပေးနေတဲ့လူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျ ကျွန်တော် ဆ်ုိရင် rapidshare နေ ဒေါင်းလိုက်ရင်တစ်ခါမှကိုအဆင်မပြေ ပါဘူးခင်ဗျ
လုပ်တက်သလောက်တော့လုပ်တာပါပဲ ကျန်တာတွေတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အခက်အခဲလေးတွေ လဲတွေ့ အမှန်တကယ် တကယ့်တကယ့်ကို လိုချင်တဲ့ဆော့၀ဲလ်ကလဲ ဒေါင်းလို့လဲမရဖြစ်နေပြန်တော့လဲလိုချင်စိတ်နဲ့ ပြန်ပြီး အကူအညီတောင်းမိ ကြတာဖြစ်မှာပါ ခင်ဗျာ
ဘန်းကျော်ဘ၀ကို သနားပါနော်.. ဘန်းကျော်ဘ၀ က ဒီလိုပါပဲလေ ဘယ်တော့မှများ ဘန်းကျော် ဘ၀က လွတ်မြောက်မယ်မသိ...
ကျွန်တော်သည် ခုချိန်ထိ အိမ်ထောင်မရှိသူလူပျို ဖြစ်ပါသည်
ထိုမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့် ဘန်းကျော်ဘ၀ မှ ခုချက်ချင်း လွတ်မြောက်ပါစေသား..
ငါနော်............ စိမ်းစိမ်းကြီးကို အားနာလို့ မပြောတော့ဘူး ( ေ- -ာ ေ-ာင် ) သဘောပေါက်။
နာ့ 512 လိုင်း ကို တစ်ယောက်တည်း သုံးတယ်လို့ ဘူပြောလဲ.... အားလုံး ၀ိုင်းသုံးကြတာ.. ကျန်တဲ့သူတွေက ဂျီမေး ဂျီတော့က လွဲပြီး ဘာမှ မသုံးတတ် ကြလို့ လုပ်တိုင်းဖြစ်နေတာ... :P
အခု အိမ်မှာတော့ Hyper Calble 1 M လေးပဲ သုံးရတာ... သိပ် အဆင်မပြေဘူး.. ခွိခွိ.....
အဲ ဒီလို အကောင့် Share လုပ်တဲ့အတွက် ဖြစ်လာမယ့် ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို ေ၀ဖန်အကြံပြုကြပါလို့.....မသင့်တော်ဘူးဆိုရင်လည်း လက်ရှိ ကျနော်နဲ့အတူစမ်းသပ်သုံးစွဲနေကြတဲ့
ကိုပရင့် စေတနာကတော့ အံ့မခန်းလေးစားစရာဘဲ။ ဒါပေမယ့်...သေချာစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
တတ်နိုင်ရင်...လင့်လေးတွေ ပြန်တင်ပေးပါ။ အပေါ်က ငါးယောက်လည်း ၀ိုင်း၀န်းကူညီမယ်ထင်ပါတယ်။ :39: ကျွန်တော် လည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပါမယ့်...။
(ကိုကို၀င်း ရေ...စိတ်ချိုးရဘူးနော်...:P) ဒါပေမယ့် link 256 ဆိုတော့..နည်းနည်းသီးခံပေးပါ။:D:)) ကိုစိုင်းလိုမဟုတ်တော့...:71:
ဟုတ်ကဲ့တင်ပေးခိုင်းရမယ့်သူကိုလည်းအားနာပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို ့မူရ့င်းလင့်ကသာဆွဲဖို ့ကြိုးစားနေရင် ဒီထက်ပိုပြီးတော့အချိန်ကြာသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်
တို ့ဟာ အင်တာနက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး အင်တာနက်ကိုအချိန်နဲ ့အမျှ ပိုက်ဆံပေး
သုံးနေရတဲ့ user တွေပါ ကျွန်တော်တို ့အခုလိုရှာလို ့မရလို ့လဲဘယ်သူကိုဘာပြောခဲ့လို ့လဲ
rapidshare တို့hotfile တို့မှာ အဆင် ပြေ ရင်တော.ပြော စရာ လို သေးလို လားဗျာ။
အ ရမ်းလို အပ် မှ သာ အား နာနာ နဲ. ပြော ရတာ။
" အလွယ်ကြိုက် လို. မဟုတ် ပါ " ဘယ် အရာ မဆို တန် ရာ တန် ကြေး ပေး ဆပ် ရ တာ ပါ ပဲ။
ဒီ connection speed နဲ. ကိုယ်ချင်း စာ ပါ တယ်
ကျ နော် တောင်း မိ ခဲ. တာ လည်း ပြန် ဖျက် လိုက် ပါ ပြီ။ :70:
ကျွန်တော်ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားကြတဲ ့အတွက် အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ
တကယ်တန်းတော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားကြည့်ကြဖို ့ပဲ ပြောချင်တာပါ
ဘယ်သူ ့ကို မှ အမြင်ကတ်တာတွေ ဘာတွေညာတွေ မရှိပါဘူး ကျွန်တော် ဒီဖိုရမ်ကိုမြတ်နိုးလွန်းလို ့ပြောမိတာပါ ကိုkyilintun အနေနဲ ့လို စိတ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး ပြောတာလဲမဟုတ်ိပါဘူး နောက်ဆိုရင် နောက်တက်လာမဲ ့လူငယ်တွေကလဲ rapid ကနေဆိုရင် မရနိုင်လောက်ဘူးလို ့သတ်မှတ်သွားကြမှာ မလို ့ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပါပဲ
ကျွန်တော်ဒီကလူတွေကို လေးစားပါတယ် အထင်လည်းကြီးပါတယ် ဒီဖိုရမ်ကိုစိတ်၀င်းစားလို ့သာ
ကျတော့နာမည်လဲပါနေတော့နဲနဲလေးပြောကြည့်မယ်နော် ခုလက်ရှိကျတော် ဘန်းကျော်ပြင်ပ ကွန်နဲ့သုံးနေပါတယ် အဲ့ဒီအတွက် MZ မှညီအစ်ကိုမောင် နှမများအစဉ်မပြေတဲ့ rapaid share လိုမျုးအကောင့်ကဟာတွေတတ်နိုင်သလောက်ဆွဲပေးပါတယ်... မဖြစ်မနေ ပြန်တင်ပေး ရန်ခက်ခဲမှသာ ကျတော် အစဉ်မပြေကြောင်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ညင်းရပါတော့တယ်... ကျတော့အထင်တော့ hotfile လောက်တော့အစဉ်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် တကယ်လို့မပြေခဲ့ဘူးဆိုရင်လဲ တတ်နိုင်သလောက် ဆွဲပြီးပြန်တင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ.... တင်တဲ့နေရာမှာလဲ ကျတော် ကွန်နက်ရှင်နဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ centralupload ကနေပဲတင်ပါ တယ်ခင်ဗျာ အဲတစ်ခါတလေ တွေ့ရတာကတော့ ifile ကနေတင်ပေးပါ mediafire ပြောင်းပေးပါ 4share မှအစဉ်ပြေပါတယ် အဲ့မှာပဲတင်ပေးပါ အဲ့လိုမျိုးတွေ တွေ့နေရပါတယ်... ကျတော့ ဆီမျာ ifile ကတင်ပြီးရင် လင့်ပြန်မကျပါဘူးခင်ဗျာ ပြင်ပြီးနောက်ပိုင်း... mediafire 4share box.net တစ်ခြား မြန်မာနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ ရှယ်ယာတွေအတော်များမျာ ဘန်းပါတယ်... ဘန်းရင် ကျော်ပြီး တင်ပေါ့ လို့ပြောစရာရှိပါတယ်ဗျာ... ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ကျတော်အင်တာနက်အသုံးပြုသူအချင်းချင်း စာနာစိတ်နဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ စိတ်နဲ့ကူညီနေချင်းပါခင်ဗျာ ကျတော်ဘယ်သူ့ ဆီကမှ အကျိုးမျှော်ကိုး ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ပါ ဘယ်သူ့ဆီကမှအကျိုးအမြတ် ရယူခဲ့ချင်းလဲ မရှိပါဘူးခင်ဗျာ... ကျတော့ ကွန်နက်ရှင်နဲ့ အစဉ်မပြေတဲ့နေရာမျိုးမှာ တင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင် ကျတော့အပေါ်မှာတမျိုးမမြင်စေချင်လို့ပါခင်ဗျာ... ကိုပုရစ် rapaid share ပရီမီယံပေး ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ အတွက် ဒေါင်းရတာပိုအစဉ်ပြေသွားပါတယ် ခင်ဗျာ... ဒါပေမဲ့ကျတော့ ဘက်ကအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ upload site မှာရချင်တဲ့ဟာတွေမရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့အတွက် နားလည်ပေးကြပါကုန်... ခုဆို ကို Nano မှ uploading share host ရဲ့ပရီမီယံ အကောင့်တစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုကိုပါ လှူဒါန်းပြီးဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီနေရာများမှဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပြုပြီး အဲ့ဒီပရီမီယံယူ ဇာနိမ်းအသုံးပြုပြီး ကို့ဟာကိုဒေါင်းစေချင်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျတော်တို့ဒေါင်းပြီးပြန်တင်ပေးလဲ အစ်ကိုအစ်မတို့အနေနဲ့ပြန်ဒေါင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်... အလုပ်တစ်ခုထဲကို နှစ်ယောက် ပင်ပန်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့... ကျတော်တို့ ဘက်ကတစ်ခု အခက်အခဲလဲရှိပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး ဥပမာ window xp /7 စတာတွေ ကိုဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်အကြီးကြီး ပြန်တင်ပေးရန် အခက်အခဲရှိပါမယ်.... တစ်ချို့တွေတောင်တာလေးတွေလဲရှိပါတယ် 100 M လောက်ကို456ပိုင်လောက်ခွဲ ထားတာေတွေလဲရှိပါတယ် အဲ့ဒါတွေလဲ ထို့အတူဒေါင်းပေးပါ့မယ် ပြန်မတင်ပေးနိုင် တာတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဗျာ... အိမ်နီးရင်တော့ လာယူကြပါ ... နောက်ပြီးတစ်ချို့ရှိတာက အဲ့ဒီ software လေးတွေကအရမ်းပေါတယ်ဗျာ..
www.download.com www.softpedia.com www.click-now.net www.filehipo.com
အစရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာ သွားယူလိုက်ရုံနဲ့ရပါတယ်ဗျာ အဲ့လိုဟာလေးတွေကျ တောင်းတဲ့ လူတွေကိုတိုင်က အနည်းငယ် အဲ့ဒီနေရာတွေမျာသွားကြည့်စေချင်ပါတယ် တစ်ခြား ဖရီးရနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေလဲအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာ google မှာရှာလိုက်ရင်အများ အပြားထွက်လာမှာပါ အဲ့လို ရှာလို့ ခနကပြောတဲ့ နေရာတွေမှာပဲရှိတယ် လုံးဝအစဉ်မပြေဘူး ဆိုရင်တော့ တောင်းပါဗျာ အစဉ်ပြေပြီးတင်ပေးနိုင်သလောက် ကျတော်တို့ ကူညီပါ့မယ်...
ဆိုလိုရင်ကတော့ တောင်းတဲ့သူတွေကိုတိုင်ကလဲအနည်းငယ် google မျာရှာကြည့်ပြီးမှ တောင်းပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံတာပါခင်ဗျာ အားလုံးပဲအစဉ်ပြေကြပါစေ.... အဲ ကျတော်ရန်ကုန်ပြန် ရောက်ပြီးရင်တော့ ကျတော်ကိုတိုင်လဲ မိတ်ဆွေတို့နည်းတူ bagan နဲ့ MPT ပဲသုံးရမှာဖြစ်လို့ သည်းခံပေးကြပါကုန် (ပြောသာပြောရတယ် ဘယ်နေရာဖရီးကုန်း ဆင်းရမှန်းခုထိမသိသေး ):D အွန်လိုင်းတောင် နပ်မှန်အောင် တက်နိုင်ပါ့မလား.... :39:ကျတော်ရေးတာတွေအမှားပါသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်....